နားခိုရာ: January 2009
အဖေနဲ့အမေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဓါတ်ပုံလေးပါ။ သူတို့မင်္ဂလာဆောင်က Strand Hotel မှာလုပ်တာတဲ့။ ကော်ဖီ လဘက်ရည်တိုက် မုန့်ကျွေးပေါ့။ အဲဒီခေတ်က ငွေထောင်ဂဏန်းလောက်ပဲကုန်ကျသတဲ့။
ဒါက ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမလေးယောက်ရဲ့ပုံပေါ့။ လွိုင်ကော်ကို အမေက အလုပ်တာဝန်နဲ့ မပြောင်းရခင်အချိန်လောက်မှာ ရိုက်ထားတာ။ ကျွန်တော်က နှစ်တန်းရောက်ပြီထင်တယ်။ အခုအချိန်မှာ မောင်နှမတွေ တစ်ယောက်တစ်နေရာရောက်ကုန်ပြီ။ ညီမအကြီးဆုံးက မော်လမြိုင်မှာ NGO တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ အလတ်မက တရုတ်ပြည် ကွေးမိန်မှာ။ အငယ်ဆုံးညီမပဲ ရန်ကုန်မှာ အဖေအမေတို့နဲ့ကျန်တယ်။
လွိုင်ကော်တောင်ကွဲစေတီကို နောက်ခံထားတဲ့ မိသားစုပုံပေါ့။ အမေက အဲဒီတုန်းက စာရင်းစစ်ရုံးမှာပေါ့
ဒါက ကျွန်တော် ပထမဆုံးအကြိမ် ရဟန်းခံတုန်းက။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ရောက်နေပြီ။ ဟာမစ်တစ်က မဟာစည်သာသနရိပ်သာမှာပါ။
ကျွန်ပျူတာထဲက ဖိုင်တွေရှင်းရင်း ဒီပုံလေးတွေ ပြန်တွေ့လို့။
Posted by little moon at 9:58 AM 10 comments:
Australian Open Tennis ပွဲရဲ့ အမျိုးသမီး quarter final ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီပို့စ် စရေးနေချိန်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်တစ်ပွဲစီနိုင်ပြီး နောက်ဆုံး set ကို ရိုက်နေကြပါတယ်။ အတော့်ကို အကြိတ်အနယ် ရှိပုံရတယ်။ ပွဲချိန် နှစ်နာရီ ဆယ့်ငါးလောက် ရှိနေပြီ။ (ရုံးချိန်ကြီး ဖြစ်နေတာ နာလိုက်တာ။ ညကြမှ highlight လေးပြန်ကြည့်ရတာပေါ့။)
ရုရှားတင်းနစ်မယ်လေး Safina ကတော့ လက်ရှိ WTA အဆင့်၃ပါ။ သူ့ကို စပြီးသတိထားမိတာကတော့ မနှစ်က ပြင်သစ်တံခွန်စိုက် မြေစေးကွင်း ပြိုင်ပွဲမှာ နံမည်ကြီးတွေကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အနိုင်ယူပြီး ဗိုလ်လုပွဲအထိ တက်လှမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာပါ။ အဲဒီပွဲတုန်းက Ana Ivanovic ကို ရှုံးပြီး ဒုတိယပဲရခဲ့ပါတယ်။ အခုဒီပွဲစဉ်တစ်လျှောက်မှာ လက်ရည်မှန်မှန်နဲ့ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တက်လှမ်းလာတာပါ။ 4th round မှာတော့ Alize Cornet (FRA, 15) ကို နောက်ဆုံး set မှာ 5-2 နဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွား လက်ပျက်ပြီး ရှုံးနေရာက 7-5 နဲ့ နိုင်လာခဲ့တာပါ။ ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာပေးခဲ့တယ် ဆိုရင်းလဲမမှားပါဘူး။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Safinaကို အခုဒီနှစ် Australian Open ချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ပြီးရင်း ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ Sony WTA Ranking 1 ဖြစ်လာမယ်လို့ လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Australian တင်းနစ်မယ်လေး Jelena Dokic ကတော့ WTA ranking 187 ပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဒီနှစ်ပွဲစဉ်မှာ quarter final ပွဲအထိ တက်လှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ 2nd round ပွဲ အနိုင်ရ ကတည်းက စပြီးသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ အဆင့် ၁၇ရှိ ရုရှာတင်းနစ်မယ် Ana Chakvetdzeကို သုံးပွဲ အကြိတ်အနယ်ရိုက်ခဲ့ပြီး နှစ်ပွဲ တစ်ပွဲနဲ့နိုင်ခဲ့တာပါ။အနိုင်ရိုက်ခဲ့တာပါ။ 3rd round မှာ အဆင့် ၁၁ Caroline Wozniacki ကိုလည်း သုံးပွဲ ရေကုန်ရေခမ်းရိုက်ပြီး နိုင်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ 4th round မှာတော့ Ana Ivanovic ကို ဖြုတ်ချပြီး တက်လာခဲ့တဲ့ ရုရှားတင်းနစ်မယ်လေး Alisa Kleybanova (အဆင့် ၂၉) ကိုလည်း တော်တော်လေးကို ပင်ပင်ပန်းပန်း သုံးပွဲဆက်ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးset မှာ ခြေကျဉ်းဝတ်လိမ်သလိုဖြစ်ပြီး နာသွားသော်လည်း ဆက်ကစားပြီး အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ Australian ပရိသတ်တွေကတော့ ဂုဏ်ယူမဆုံး တပြုံးပြုံးနဲ့ ပေါ့။ အခု Quarter မှာ Sefina နဲ့တွေ့တာပါ။ ပွဲကစားချိန် နှစ်နာရီခွဲလောက်ရိုက်ပြီး Safina က 6-4, 4-6, 6-4 နဲ့အနိုင်ရသွားပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်အပြည့်နဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားရိုက်လာခဲ့တဲ့ Jelana Dokic အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ...
Posted by little moon at 5:19 PM4comments:
Posted by little moon at 3:00 PM 11 comments:
Australian Open ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ အခု 3rd Round ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ တင်းနစ်မယ် Jelena ပါ။ သူဟာ Sony WTA ranking အရဆိုရင်တော့ ၁၈၇ ပဲရှိပါတယ်။ Australian Open ကို 1999မှာ 3rd round သို့ရောက်ရှိခဲ့ဖူးပြီး အခုမှနောက်တစ်ခါထပ်ရောက်တာပါ။ 3rd round မှာ C.Wozniaski(11) ကိုရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Semi မှာ Safina(3) နဲ့ တွေ့နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
Posted by little moon at 9:10 AM5comments:
Posted by little moon at 11:04 AM2comments:
မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့မှာ2nd Round ပွဲတွေ ရိုက်ကြပါတယ်။ မနက်ဖန်မနက်ကစလို့ 3rd Round စပါပြီ။ 2nd Round ပွဲတွေမှာ အမျိုးသာ အမျိုးသမီး ထိပ်သီးတင်းနစ်သမားတွေ အားလုံးနီးပါး အောင်ပွဲရခဲ့ပါတယ်။
ထူးခြားပြီး ကြည့်ကောင်းခဲ့တဲ့ ပွဲလေးတစ်ပွဲကတော့ တရုတ်တိုင်ပေက တင်းနစ် သမား Yen-Hsun Lu က အဆင့်(၁၀)ရှိတဲ့ အာဂျင်တီးနားက David Nalbandian ကို ငါးပွဲအပြည့် အကျိတ်အနယ်ကစားပြီး အနိုင်ယူသွားတဲ့ပွဲပါ။
မနေ့ညကမှ replay ပြန်ပြလို့ ကြည့်လိုက်ရတာ။ တကယ့်ကို အရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ဓါတ်အပြည့်နဲ့ အားကြိုးမာန်တက် ကစားသွားတာ။ ကောင်းမှကောင်းပဲ။
သူ့အနေနဲ့ 3rd round မှာ T.Robredo(21) ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ရင် 4th round မှာ Murray နဲ့ ကစားရမယ်။
ဒီနေ့မနက် ပြိုင်ပွဲရလဒ်တွေတဲ့ ပွဲစဉ်ဇယားကို ကြည့်ရင်း ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းကို မှန်းကြည့်နေမိတယ်။
Federer အနေနဲ့ တတိယအဆင့်မှာ Safin(26) ကို အနိုင်ရိုက်ပြီးရင် Quarter မှာ အာဂျင်တီးနားက J.DelPotdro(8) ကို တွေ့နိုင်တယ်။ Semi မှာ Roddick(7) သို့မဟုတ် Djokovic(3) နဲ့ ဆုံမယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်။
လက်ရှိချန်ပီယံDjokovic အတွက် လမ်းကြောင်းကတော့ သိပ်မချောင်ဘူး။ Quarter မှာ Roddick, Semi မှာ Federer, Final မှာ Nadal .... ဒီလိုကျော်ဖြတ်နိုင်မှ ချန်ပီယံသရဖူကို ကာကွယ်နိုင်မှာ။
Nadal အနေနဲ့ Quarter ရောက်ခဲ့ရင် G.Simon(6) သို့မဟုတ် MonFils(12)နဲ့ တွေ့နိုင်ပြီး Semi မှာ A.Murray(4) နဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။
အမျိုးသမီးပွဲတွေအနေနဲ့ လက်ရှိနံပါတ်တစ် Jankovic က Quarter မှာ ရုရှားတင်းနစ်မယ် နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ N.Petrava(10) သို့မဟုတ် V.Vannareva(7) ကို ရင်ဆိုင်ရမယ်။ Semi မှာ D.Sefina(3) သို့မဟုတ် A.Ivanovic(5) နဲ့ တွေ့နိုင်တယ်။
Ana Ivannovic အနေနဲ့ Quarter မှာ Safina(3), Hantuchova (19), A.Cornet(15)တို့ထဲက တစ်ယောက် ယောက်နဲ့ တွေ့နိုင်တယ်။ တကယ်လို့ 4th round မှာ Wozniaski(11) ဒါမှမဟုတ် Australia က Jelena Dokic ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့။
မနှစ်က Wimbledon တုန်းကလို Williams ညီအမ Final မှာတွေ့ဖို့မရှိပါဘူး။ Semi ကို နှစ်ယောက်လုံး တက်လာခဲ့ရင် သူတို့နှစ်ယောက် semi မှာ ဆုံကြပါမယ်။
မနှစ်က Wimbledon Semi final မှာ Williams အငယ်မကို အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ တရုတ်တင်းနစ်မယ် J.Zheng အနေနဲ့ Quarter ရောက်ခဲ့ရင်တော့ ရှုံးကြွေးပြန်ဆပ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရမှာပါ။ William အငယ်မနဲ့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲခန့်မှန်း ခန့်မှန်းမထင်မှတ်ထားတဲ့ ရလဒ်တွေကတော့ ထွက်စမြဲပါ။ မနှစ်က J.Zheng က ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁) Ana Ivanovic ကို နှစ်ပွဲပြတ်အနိုင်ရိုက်သွားသလိုပွဲမျိုးတွေပေါ့။ ရင်ခုန်စွာနဲ့ ဆက်ပြီး ကြည့်ကြတာပေါ့ .....
Posted by little moon at 5:17 PM No comments:
Posted by little moon at 4:56 PM5comments:
17 Jan 09 (စနေနေ့)
မနက်ပိုင်းမှာ သားသား ကန်တော်ကြီး မြေပဒေသာကျွန်းဖက်ရောက်တယ်။ သူ့မေမေ ရုံးကနိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက် new year present အဖြစ် ပန်းပင်လေးတွေကို ၀န်ထမ်းတွေကို ပေးချင်လို့ဆိုလို့ သွားဝယ်ပေးရင်း ခေါ်သွားတာ။ အပင်တွေရွေးရင်း၊ ပန်းအိုးကြည့်ရင်း ဈေးဆစ်ရင်းနဲ့ သူ့ကို သတိမထားမိလိုက်ကြဘူး။ ချီထားရင်းနဲ့ သူက ပန်းအိုးရောင်စုံလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရင်း လှမ်းကိုင်နေတာကိုး။ အတော်လေးနေလို့ ခွမ်း ကနဲ ကွဲတဲ့အသံကြားမှ သားသားပန်းအိုးတစ်ခုကို လှမ်းဆွဲပြီး မနိုင်လို့ ပစ်ချလိုက်တာ သတိထားမိကြတယ်။ :D ပန်းအိုးဖိုး နှစ်ထောင့်ငါးရာမှာ လျှော့ဈေးနဲ့ နှစ်ထောင် လျော်ခဲ့ရတယ်။ ငါးလသားပဲရှိသေးတယ် စလျော်ရပြီ။
18 Jan 09 (တနင်္ဂနွေနေ့)
ဘကြီးဇော်မိုးအိမ်မှာ အိမ်တက်ဆွမ်းကျွေးရယ်၊ သမီးငယ် နံမည်ပေးကင်ပွန်းတတ်ရယ် ဖိတ်ထားတာကြောင့် သွားဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်။ ညီလေးမောင်ဝင်းထိန်က ကားနဲ့ ၀င်ကြိုပေးမှာမို့ သားကိုလဲပြင်ဆင်ပြီး စောင့်နေ ကြတယ်။ သားသားအပြင်တစ်ခါထွက်ရင် (ကြာမယ်ဆိုရင်) ယူရတဲ့ပစ္စည်း ပစယတွေက မနည်းဘူးလေ။ ၈နာရီကျော်ကျော်မှာစထွက်ဖြစ်တယ်။ ဘကြီးအိမ်ရောက်တော့ မနေ့က ၀ယ်ထားတဲ့ ပူးနဲ့ ပစ်ကလက် ၀က်ဝံနှစ်ရုပ်ကို သမီးနှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တစ်ကောင်ဆီပေးလိုက်တယ်။ မွေးနေ့ရင် အငယ်မလေးကိုပဲ အများကပေးကြမှာဆိုတော့ အကြီးမလေးအတွက်ပါ ၀ယ်လာခဲ့တာ။
ပြီးတော့ အင်မတန်မှ စားကောင်းလှတဲ့ ကြာဇံချက်ကို သုံးပန်းကန်လောက် ဆွဲလိုက်တယ်။ မနက်ကတည်းက ဘာမှမစားခဲ့ရသေးဘူးလေ။ ကလေးတွေများတော့ သားကလည်း တပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့။ အပြန်မှာ ၅၂လမ်းအမေတို့အိမ်ကို သွားလိုက်တယ်။ ၀င်းထိန်ပဲ ပတ်ပြီးပို့ပေးတယ်။ သားသားက သိပ်မရွှင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
၀မ်းချုပ်နေတာလေ၊ ငိုပြီး အတင်းညှစ်ပါလိုက်တာ eတုံးကျစ်ကျစ်လေးတစ်တုံးပဲထွက်တယ်။ နို့လည်း မသောက်ချင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းမိန်းမ ဆရာဝန်မကိုလှမ်းမေးရတယ်။ အသီးအနှံလေးကျွေးပါတဲ့။ ၀မ်းချူလိုက်ပါတဲ့။ ဒါနဲ့ သူညွှန်တဲ့ City Mart မှာရောင်းတဲ့ Henz တံဆိပ်နဲ့ ကလေးကျွေးတဲ့ အသီးအနှံ ကျိတ်ထားတဲ့ပုလင်းလေးတွေ သွားဝယ်ရတယ်။ ၀မ်းချူပြီးတဲ့အချိန်မှာကလေးက တော်တော်နေသာ ထိုင်သာရှိသွားပုံရတယ်။ အစာလည်း ပြန်စားတယ်။ နို့လည်းစို့တယ်။ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ညနေ ၆နာရီလောက်မှာ ဗဟန်းအိမ်ပြန်ကြတယ်။ ညဖက်မှာ ၀မ်းပျော့ပျော့တစ်ခါထပ်သွားတယ်။ သားသား နေလို့ကောင်းသွားပြီ ...
Posted by little moon at 11:02 AM No comments:
ရာသီဥတုက ဒီတစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်မှာ သိသိသာသာအေးလာတယ်။ မိုးလေ၀သ သတင်းတွေ အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ တိုက်တဲ့လေတွေကလဲ အေးစိမ့်နေတာပဲ။ နွေဆိုအင်မတန်ပူအိုက်တဲ့ ဘေးပြူတင်းပေါက်လုံးဝမရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ခန်းလေးတောင် အတော်အေးနေတယ်။ ညဖက်ဆို လက်ရှည်တို့ ဘောင်းဘီရှည်တို့ ၀တ်မအိပ်မိရင် ချမ်းစိမ့်ပြီး နိုးလာရော။
အေးလို့ထင်တယ် မနေ့ကတောင် သားလေးက ကိုယ်လေး နည်းနည်းနွေးပြီး အစာမကြေသလိုဖြစ်ပြီး နို့တွေ ပြန်အန်တယ်။ ဒါနဲ့ ပါရာစီတမောအရည်လေးတိုက်ထားပြီး နွေးနွေးထွေးထွေးလေး ၀တ်ပေးထားရတယ်။ အခုမနက်တော့ ပြန်ပြီး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ဆော့ကစားနေပါပြီ။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း မနေ့ညနေပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်ပြီး ကိုယ်လက်တွေညောင်းကိုက်နေတာနဲ့ ဆေးသောက်ပြီး စောစောအိပ်လိုက်ရတယ်။ အခုမနက်လည်း နှာရည်တွေ တရွှတ်ရွှတ်နဲ့ ဖြစ်နေပြီး ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့ရယ် ....
Posted by little moon at 11:38 AM3comments:
အခု ၂၀၀၉ကတော့ ထူးခြားတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်မှာပါ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကြီးက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်း မသိမသာနဲ့တဖြေးဖြေး ထိခိုက်လို့လာပါပြီ။ Seminar တွေမှာ ပညာရှင်များကပြောသလို (၁) Export တွေ ထိခိုက်မယ်။ (၂) Tourism လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မယ်။ (၃) နိုင်ငံရပ်ခြားမှာသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေ လွှဲငွေတွေထိခိုက်မယ်။ (၄) အခစားလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ ဥပမာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မယ်။
ပထမဆုံး စထိတာကတော့ အိန္ဒိယ၀ယ်တဲ့ဖက်က ပဲဈေးတွေကျတော့ လေပါကားနဲ့ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကား ဈေးကစားခဲ့ကြတဲ့ ပဲကုန်သည်များအတော်ကို အထိနာကုန်ကြတယ်။ ဆန်တွေ၊ ငါး၊ ပုဇွန်တွေ export ဈေးကျတယ်။ တောင်သူတွေ စိုက်ပျိုး မွေးမြူခဲ့ရတဲ့ဆီမှာ ကုန်ကျတဲ့စရိတ်တောင်မကာမိတဲ့ ဈေးအထိ ကျသွားရင်တော့ နောက်နှစ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူဖို့အတွက် အရင်းမရှိတော့လို့ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါသတဲ့။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ကြည့်ရင်လဲ အရင်နှစ်က ဘုန်းကြီးအရေးအခင်း၊ ပြီးတော့ နည်းနည်းလေး တည်ငြိမ်မယ် မရှိသေးဘူး နာဂစ်နဲ့ကြုံပြန်ရော၊ အခုတစ်ခါ စီးပွားပျက်ကပ် .... ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတွေ၊ လေယာဉ် လက်မှတ်အေးဂျင့်တွေ၊ ဟော်တယ်တွေ၊ ခရီးသွားကားတွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေ ... တော်တော်အလုပ်ပါးကုန်ကြတယ်တဲ့။ နိုင်ငံခြားခရီးသည်ကလည်းအရမ်းကိုနည်းနေပါသတဲ့။ ဗေထိ..ဆိုရင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကအရင်ထိတာပါပဲတဲ့။ ဒါကြောင့် ချောင်းဆိုးနှာချီတာတောင် ကျယ်ကျယ်မလုပ်ဝံ့ဘူး ...ဧည့်သည်မလာမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး ဟော်တယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်အသင်းက အကြီးအကဲက UMFCCIဟောပြောပွဲတုန်းက အရွှန်းဖောက်ပြောတာလေး သတိရမိသေးတယ်။
ကိုယ်တွေ့သလောက်တော့ အခြေခံစားကုန် ဆန်၊ဆီကအစ ဈေးတွေကသွားတယ်။ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ရောင်းတဲ့သူတွေလည်း အရောင်းထိုင်းလို့ ငြီးနေကြတယ်။ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတို့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတို့ဆိုရင်တော့ ဈေးက တော်တော့်ကို ကျသွားတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းတွေ Discount တွေ အတင်းပေးပြီး ရောင်းနေရတဲ့အခြေအနေပဲ။
ကိုယ်တို့ အပျော့ထည် ရေးရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုလဲ နှစ်လလောက်ရှိပြီ။ သိသိသာသာကို အရောင်းကျသွားတယ်။ ဒီကြားထဲ မီးတွေကလည်း အလှည့်ကျ ပြန်ပျက်နေပြီဆိုတော့ မီးစက်အတွက် ဆီဖိုးကလည်း ပိုကုန်သေးတယ်။ တော်သေးတာက ဆီဈေးကအရမ်းကြီးမတက်သေးတာပဲ။ Strategy တွေပြောင်းရတာပေါ့။ ဂျပန်နည်း စဉ်းစားရ တာပေါ့။ TQM ထဲကလိုပေါ့ ရေလျှော့သွားလို့ ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်လာမှ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကို Efficient ဖြစ်အောင် Effective ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ်၊ Waste တွေကို ရှာပြီးဘယ်လိုလျှော့မယ် ဆိုတာမျိုးတွေ စဉ်းစားလာရပြီ။ သူဌေးဈေးရောင်းဆိုတာမျိုး လုပ်လို့မရတော့ဘူး။
အရင်ကလို ဒီ Software တစ်ခုကို ငါးသိန်းရမှရောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ attitude မျိုးကနေ သုံးသိန်းပဲပေးနိုင်တော့တဲ့ Customer ကို ကိုလည်း မရှုံးအောင် ဘယ်လိုရောင်းရမလဲ၊ မြန်မြန်ပြီးအောင် Quality လည်းမကျအောင် စရိတ်စက လည်း ကုန်သင့်တာထက်ပိုမကုန်အောင် ဆိုတာမျိုးတွေကို ခေါင်းပူလောက်အောင်ကို စဉ်းစားနေရပြီ။
၀ါသနာပါလို့ တန်ဖိုးထားပြီး ငတ်တစ်လှည့် ပြတ်တစ်လှည့် လုပ်လာခဲ့တာ ဆယ်နှစ်တောင်ကျော်ပေါ့။ ဒီစီးပွားပျက်ကပ်ဆိုတာကြီကြောင့်တော့ ကိုယ်တို့အဖွဲ့အစည်းလေးကို အပျက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အကြောက်လွန် နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နာဂစ်တုန်းကလို သတိထားပြင်ဆင်ချိန်ရခဲ့ရက်နဲ့ ပေါ့ဆပြီး အလေးမထား မိတာမျိုး နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မဖြစ်ချင်တာပါ။
Posted by little moon at 10:03 AM 1 comment:
တရုတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ သူ့အဒေါ်လတ်ရဲ့ ၀က်ဝံရုပ်တွေနဲ့ သားသားက သဘောတွေကျလို့
Posted by little moon at 5:07 PM2comments:
Top seed Ana Ivanovic of Serbia was upset by Amelie Mauresmo 6-3 6-2 in the Brisbane International quarterfinals.
Posted by little moon at 3:18 PM No comments:
Posted by little moon at 1:49 PM2comments:
အရင်အပတ်က သားသားကတုံးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ မွေးပြီးတော့ တစ်ခါပဲခေါင်းရိတ်ရသေးတာ။ သူ့ဆံပင်တွေက သန်တယ်။ ရှည်လာတာလဲမြန်တယ်။ ရှည်လာတော့ သူယားတယ်ထင်တယ် ခေါင်းကို ခဏခဏ ကုတ်ကုတ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့ဆံပင်ကို ညှပ်ပေးဖို့ စီစဉ်ကြတာပေါ့။ သူ့အမေက့ အရင်းမှာ ဓါးပါတဲ့ ဘီးလေးဝယ်လာပြီး ဖြတ်ပေးဖို့ စမ်းကြည့်ကြတယ်။ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က ကပ်ကြေးလေးယူပြီး ဖြတ်ကြည့်တယ်။ သူကလည်းမငြိမ်တော့ သတိထားဖြတ်ရင်းနဲ့ ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးခေါင်းက ကြွက်ကိုက်ထားသလိုဖြစ်သွားရော။ ဒါနဲ့ယောက်ခမက ငါ့မြေးကို ဒီလိုပုံပျက်ပန်းပျက်ကြီးတော့မထားပါနဲ့ဆိုပြီး ခေါင်းရိတ်ပေးကြပါလေရော။ ဒီတစ်ခါခေါင်းရိတ်တော့ ကိုယ်တော်က ငိုလိုက်တာမှာ အာပြဲနေတာပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆံပင်တွေအားလုံး ပြောင်အောင် စင်အောင် မရိတ်လိုက်ရပါဘူး။ ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်းကျန်နေတာတွေနဲ့ပဲ ရပ်လိုက်ရတယ်။ :D
Posted by little moon at 11:45 AM4comments:
Posted by little moon at 11:25 AM2comments:
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ နှစ်သစ်မှာ အားလုံး လူသစ် စိတ်သစ်နဲ့ အင်အားတွေမွေးလို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေ။ အလုပ်အကိုင် စီးပွားများလဲတိုးတက်ကြပါစေဗျာ။ ကျွန်တော်မျိုးကြီးကတော့ လက်ရှိအလုပ်ဟောင်း၊ ရုံးခန်းအဟောင်းမှာပဲ။ လက်ရှိကွန်ပျူတာအဟောင်းလေးနဲ့ပဲ အခု ဘလော့ရေးနေပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ... ၂၀၀၉နှစ်ဦးမှာလဲ လက်ရှိမိန်းမအဟောင်းနဲ့ပါပဲ :P
နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်ကို ဒီနှစ်မှာ သိပ်ထူးခြားပြီးမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အသက်တွေကြီးလာလိ်ု့လားတော့မသိဘူး။ သိပ်ပြီး feeling မလာတော့သလိုပဲ။ နောက်ပြီး 31st December Night ဆိုရင် ရှုပ်ယှက်ခပ်ပြီး အာရုံနောက်လွန်းလို့ သိပ်မထွက်ဖြစ်တာ။
30th night မှာတော့ Gathering လေးလုပ်ဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကိုနဗန၊ ကိုသူရ၊ ကိုသက်..တို့နဲ့ပေါ့။ ဘကြီးဇော်မိုးနဲ့ ဆရာရဲတို့လဲပါတယ်လေ။ မရိုးနိုင်သော Friendship ဆိုင်မှာပဲပေါ့။ အားလုံးကြိုက်တဲ့ Jack ကိုခံစားကြတာပေါ့။ ဆရာရဲနဲ့အတူ ဆရာကတော် မသင်းလဲပါလာတော့ အိမ်က မိန်းမကို ဖုန်းဆက်ပြီး လာခိုင်းလိုက်တယ်။ မသင်းလဲမပျင်းရအောင် မိန်းမလဲ ကိုယ့်ကို နောက်ကျနေပြီ ပြန်မလာသေးဘူးလားဆိုပြီး အာရုံမနောက်ရလေအောင်ပေါ့။ Jack ကုန်သွားတော့လဲဘီယာဆက်သောက်ပေါ့။ Friendship ကထတော့ သီချင်းဆိုချင်ကြလို့ နီးနီးနားနား လမ်းကူးပြီး Relax ကို ၀င်ကြတယ်။ ခေတ်ဟောင်းသီချင်းကအစ ဟစ်ပ်ဟော့ အဆုံး မျိုးစုံအောင် အော်ကြဟစ်ကြနဲ့။ နောက်ထပ် Jim Bean တစ်လုံးထပ်သောက်ဖြစ်တယ်။ ပြန်ကြတော့ သန်းခေါင်ကျော်လောက်ရှိပြီ။
31st Dec (မနေ့က)တော့ အမေတို့အိမ်မှာ ဘက်ထရီအိုးပျက်နေပြီဖြစ်လို့ အသစ်တစ်လုံးဝယ်သွားပြီး သွားတပ်ပေးတယ်။ မီးချောင်းလေးတွေ အဆင်ပြေအောင်နေရာချပေးလိုက်သေးတယ်။ အမေတို့အိမ်ဖက်က အလှည့်ကြမီးပျက်နေပြီ။ ကိုယ်တို့ ဗဟန်းဖက်ကတော့ ဘုရားနားနီးလို့လားမသိ မီးမပျက်သေးဘူးရယ်။
အပြန်မှာ CityMart ၀င်ပြီး စက္ကူဗူးနဲ့ Red Wine တစ်ဗူးဝယ်တယ်။ new year eve မို့လားမသိ ဈေးဝယ်သူတွေ များလိုက်သည့်ဖြစ်ချင်း။ ၀ယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလဲ ညဖက် အပျော်ချက်ကြပြုတ်ကြကင်ကြဖို့ ဟာတွေများတာကို သတိထားမိတယ်။ ငွေရှင်းဖို့ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် စောင့်လိုက်ရတယ်။
အိမ်ရောက်တော့ သားလေးနဲ့ဆော့ရင်း ယောက်ခမရဲ့ ငါးမြင်းကြော်လေးတွေ နိုက်စားရင်း ၀ိုင်လေးကို ခံစားတာပေါ့။ မိန်းမလာရင် အသင့်သောက်ရအောင် ၀ိုင်ခွက်တစ်ခွက်အသင့်ထုတ်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက Year End စာရင်းတွေ ပိတ်နေရလို့ တော်တော်မိုးချုပ်မှပြန်ရောက်တယ်။
၂လမ်းထိပ်က ရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာလဲ ပလုံပလုံနဲ့ ရှမ်းအိုးစည်တီးပြီး အဲဒီမှာနေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ အပြင်ကလာကြတဲ့ ဧည့်သည်တစ်ချို့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်နေကြလေရဲ့။ သူတို့ရဲ့ ပလုံပလုံ နောင်နောင် နောင်. .ဆိုတဲ့တီးသံတွေက အကြာကြီးကြားနေရရင် အာရုံနောက်လာရော။ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ TVလေးကြည့်ရင်း သားနဲ့ကစားရင်း Red Wine လေးသောက်ရင်းနဲ့ 2008 က ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ် ....
Posted by little moon at 11:12 AM 11 comments: